အာကာသဒုံးပျံများ- ၎င်းတို့ကား အဘယ်နည်း၊ လက္ခဏာများနှင့် သမိုင်းများ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 01/12/2021 10:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 30/11/2021 17:57 | နက္ခတ္တဗေဒ
လူသားသည် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် တည်ရှိသောအရာများကို ကျော်လွန်သိရှိရန် အမြဲတမ်းရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့သည်။ ဒါတွေအားလုံးကို လူကိုယ်တိုင် စုံစမ်းနိုင်စေဖို့ ၊ အာကာသဒုံးပျံများ. ၎င်းသည် လေထဲသို့ အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် သွားလာနိုင်သော ကိရိယာဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းသည် အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးတွင်လည်း လုပ်ဆောင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အာကာသဒုံးပျံများအကြောင်း သိလိုသမျှနှင့် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ပုံကို ပြောပြရန် ဤဆောင်းပါးကို ရည်ညွှန်းပါမည်။
1 အာကာသဒုံးပျံဆိုတာ ဘာလဲ။
4 အရည်လောင်စာ ဒုံးပျံများ
ဤဒုံးပျံများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ပေါက်ကွဲခန်းမှ ဓာတ်ငွေ့များကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့် ရွေ့လျားမှုကို ထုတ်ပေးသည့် ဂျက်အင်ဂျင် (ဒုံးပျံအင်ဂျင်ဟုခေါ်သည်) ရှိသည်။ ပစ်လွှတ်ပြွန်အတွင်းရှိ ပန်ကာ၏ လောင်ကျွမ်းမှုကိုလည်း တွန်းလှန်နိုင်သည်။
ဒုံးပျံများသည် စက်တွင်းလောင်ကျွမ်းအင်ဂျင်၏ ကျေးဇူးကြောင့်လည်း စက်တစ်မျိုး၊ ပြွန်မှတဆင့်ထွက်သောဓာတ်ငွေ့၏အစိတ်အပိုင်းကိုချဲ့ထွင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအရွေ့စွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။. ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့တွင် ဂျက်လေယာဉ် တွန်းကန်အားရှိသည်။ ဤတွန်းကန်အားကို အသုံးပြုသည့် အာကာသယာဉ်များကို ဒုံးပျံဟုခေါ်သည်။
ဒုံးပျံများ၊ ဂြိုဟ်တုများ၊ ဂြိုလ်တုများနှင့် အာကာသယာဉ်မှူးများကိုပင် အာကာသယာဉ်မှူးများ၏ အကူအညီဖြင့် အာကာသထဲသို့ စေလွှတ်နိုင်သည်။ ဒီသဘောအရတော့ အာကာသဒုံးပျံတွေ တည်ရှိနေတာကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ ၎င်းသည် ဂျက်လေယာဉ်တွန်းကန်အားအတွက် ဓာတ်ငွေ့ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် အရွေ့စွမ်းအင်ထုတ်ပေးသည့် အတွင်းလောင်ကျွမ်းအင်ဂျင်ကို တပ်ဆင်ထားသော စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အာကာသ ဒုံးပျံ အမျိုးအစား များစွာ ရှိပြီး အရေးကြီးဆုံး များမှာ-
အဆင့်အရေအတွက်ကို ထည့်တွက်ရင် တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ single phase ဒုံးပျံများmonolithic rockets နှင့် multiphase rockets များဟုလည်း ခေါ်သည်။ ဟူသောအမည်တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်း အဆင့်များစွာဖြင့် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
လောင်စာအမျိုးအစားကို သုံးသပ်ကြည့်လျှင် ဒုံးပျံများကို တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အစိုင်အခဲလောင်စာဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းနှင့် တွန်းကန်အား လောင်ကျွမ်းခန်းအတွင်း အစိုင်အခဲအခြေအနေတွင် ရောနှောနေသော၊ နှင့် အရည်လောင်စာဆီ ဒုံးပျံများ။ နောက်တစ်ခုက ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းနှင့် တွန်းကန်အား အခန်းအပြင်ဘက်တွင် သိမ်းဆည်းထားခြင်းကြောင့် လက္ခဏာရပ်ဖြစ်သည်။
သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ လူသားတွေကို အာကာသထဲကို အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်နိုင်လို့ အရေးကြီးတဲ့ ဒုံးပျံတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါတို့ကို ကိုးကားသည်-
Vostok-K 8K72K၊ ဒါက ပထမဆုံး လူလိုက်ပါတဲ့ ဒုံးပျံပါ။ ရုရှားနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Yuri Gagarin သည် အာကာသသို့ ပထမဆုံးရောက်ရှိရန် တာဝန်ရှိသည်။
Atlas LV-3B John Glenn ကို ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းသို့ ရောက်အောင် ပထမဆုံး အမေရိကန် ဒုံးပျံအဖြစ် ဖန်တီးလိုက်ပါ။
Saturn V ကိုNeil Armstrong၊ Michael Collins နှင့် Buzz Aldrin တို့ကို လပေါ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားသော ဒုံးပျံဖြစ်သည်။
အမှုန့်ပြွန်ပါသော ဓာတ်ပြွန်ဒြပ်စင်ကို ဒုံးပျံဟုလည်း ခေါ်သည်။ ဆလင်ဒါအောက်ခြေတွင် မီးစာတစ်ခုပါရှိသည်- မီးထွန်းလိုက်သောအခါတွင် ၎င်းသည် လောင်ကျွမ်းပြီး ဓာတ်ငွေ့များ ကုန်ဆုံးသွားကာ ဒုံးပျံသည် လေထဲတွင် ပေါက်ကွဲပြီး ကျယ်လောင်သော အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အရှိန်တက်လာစေသည်။
အာကာသ ဒုံးပျံများ၏ လည်ပတ်မှုနိယာမသည် ရှုပ်ထွေးသော်လည်း နိယာမဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 1232 ခုနှစ်ကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့သိခဲ့သော ပထမဆုံးယမ်းမှုန့်ဒုံးပျံများနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် XNUMX ရာစုတွင် Henan ပြည်နယ်၏မြို့တော်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းအချို့တွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ၁၅ ရာစုနှင့် ၁၆ ရာစုများတွင် အာရပ်များက နောက်ပိုင်းတွင် ဥရောပသို့ ရော့ကတ်များကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့ကို ၁၉ ရာစုတွင် ပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိ တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးတွင် လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
အာကာသ ဒုံးပျံများသည် အခြေခံအားဖြင့် နယူတန်၏ တတိယနိယာမ၊ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် တုံ့ပြန်မှုနိယာမကို လိုက်နာသည်။ အခြေခံအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် ဓာတ်ငွေ့ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အရွေ့စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်ရန် အတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းအင်ဂျင်ကို အသုံးပြုသည်။
ရလာတဲ့ ဓာတု လောင်ကျွမ်းမှု အလွန်အားကောင်းပြီး ကြီးမားသော စွမ်းအားဖြင့် လေထုကို တွန်းချပေးလိမ့်မည်။နယူတန်၏ တတိယနိယာမအရ သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း၊ အင်အားတစ်ခုစီသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်တွင် တူညီသော ပြင်းအားရှိသော အခြားတွန်းအားတစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် လေသည် ဓာတ်ငွေ့မှ ထုတ်ပေးသော အောက်ဘက်သို့ တွန်းအားနှင့် တူညီသော အင်အားဖြင့် ဒုံးပျံကို တွန်းပို့သည်။ ဓာတ်ငွေ့ကို ထုတ်လွှတ်လိုက်သောအခါ၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှ ထုတ်ပေးသော စွမ်းအင်သည် ဒုံးပျံကို လွှင့်တင်ရုံသာမက အလွန်မြင့်မားသော အရှိန်အဟုန်သို့ ရောက်ရှိစေရန် တုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
အရည်လောင်စာသုံး ဒုံးပျံများ တီထွင်မှုသည် 1920 ခုနှစ်များတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံး အရည်လောင်စာသုံး ဒုံးပျံကို Goddard က ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် Auburn အနီး 1926 တွင် ပစ်လွှတ်ခဲ့သည်။ ငါးနှစ်အကြာတွင် ပထမဆုံး ဂျာမန်အရည်-လောင်စာသုံး ဒုံးပျံကိုလည်း သီးသန့် အစပျိုးမှုဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၂ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံသည် ၎င်း၏ဒုံးကျည်များကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပစ်လွှတ်ခဲ့သည်။
ပထမဆုံးအောင်မြင်သော အကြီးစားအရည်လောင်စာသုံးဒုံးပျံမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဒုံးပျံပညာရှင် Werher von Braun ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ဂျာမန်စမ်းသပ် V-2 ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ V-2 ကို3ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 1942 ရက်နေ့တွင် Usedom ကျွန်းရှိ Peenemünde သုတေသန အခြေစိုက်စခန်းမှ စတင်လွှတ်တင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမမျိုးဆက်တွင် အရည်လောင်စာသုံး ဒုံးပျံများ၊ ထိပ်ဖျားသည် ထိပ်ဖူး သို့မဟုတ် သိပ္ပံနည်းကျ တူရိယာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည့် အားကိုသယ်ဆောင်သည့် အပိုင်းဖြစ်သည်။
ဦးခေါင်းအနီးရှိ အစိတ်အပိုင်းတွင် gyroscopes သို့မဟုတ် gyro compasses၊ acceleration sensors သို့မဟုတ် computers ကဲ့သို့သော လမ်းညွှန်ကိရိယာများ ပါရှိသည်။ အောက်တွင် ပင်မကန် နှစ်ခု ဖြစ်သည်- တစ်လုံးတွင် လောင်စာ ပါရှိပြီး နောက်တစ်ခုတွင် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ပါဝင်ပါသည်။ ဒုံးပျံ၏ အရွယ်အစားသည် အလွန်မကြီးပါက၊ အစိတ်အပိုင်း နှစ်ခုစလုံးသည် ၎င်း၏ ဆီတိုင်ကီအား အားအင်မတန် ဓာတ်ငွေ့ အနည်းငယ်ဖြင့် ဖိအားပေးခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်ဆီသို့ ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
ဒုံးပျံကြီးများအတွက်၊ တင့်ကားသည် အချိုးအစားမမျှဘဲ ပိုလေးသောကြောင့် ဤနည်းလမ်းသည် လက်တွေ့မကျပါ။ ထို့ကြောင့် အရည်လောင်စာ ဒုံးကျည်ကြီးများ၊ လောင်စာတိုင်ကီနှင့် ဒုံးပျံမော်တာကြားတွင်ရှိသော ပန့်ဖြင့် ဖိအားကို ရရှိသည်။. စုပ်ထုတ်ရမည့် လောင်စာပမာဏသည် အလွန်ကြီးမားသောကြောင့် (V-2 သည် တစ်စက္ကန့်လျှင် လောင်စာဆီ 127 ကီလိုဂရမ် လောင်ကျွမ်းသော်လည်း) လိုအပ်သော ပန့်သည် ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်ဖြင့် မောင်းနှင်သည့် စွမ်းရည်မြင့် စင်ထရစ်ဂတ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
တာဘိုင်တစ်လုံးနှင့် ၎င်း၏လောင်စာဆီ၊ ပန့်၊ မော်တာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သော စက်ပစ္စည်းသည် အရည်-လောင်စာ ဒုံးပျံ၏ အင်ဂျင်ဖြစ်သည်။ လူလိုက်ပါသော အာကာသပျံသန်းမှု ထွန်းကားလာသည်နှင့်အမျှ ဝန်ဆောင်ခသည် ရွေ့လျားလာကာ Mercury၊ Gemini နှင့် Apollo ကဲ့သို့သော ဒုံးပျံများစွာ ပေါ်လာသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ အာကာသလွန်းပျံယာဉ်မှတစ်ဆင့် အရည်လောင်စာသုံးဒုံးပျံနှင့် ၎င်း၏ကုန်တင်ယာဉ်များကို ယူနစ်တစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် အာကာသ ဒုံးပျံများနှင့် ၎င်းတို့၏ လက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » နက္ခတ္တဗေဒ » အာကာသ ဒုံးပျံများ